Deltek ConceptShare: Yekugadzira Ongororo, Proofing, uye Kubvumidza Pamhepo | Martech Zone
Sezvo makambani ari kutsvaga kusimudzira kugadzirwa nezvikwata zvidiki, vanoda maturusi anogona kuvabatsira kuwedzera kugona. Zvekushambadzira uye zvekugadzira zvikwata zvinoreva kusangana nezvinodiwa zveprojekiti nenguva, kufambidzana nemutengi kana vaunoshanda navo, kupedzisa edits, kuwana mvumo uye kuendesa chirongwa neyakafa nguva.
Ndiko Deltek's ConceptShare mhinduro inogona kubatsira. Icho chishandiso chinogonesa kushambadza uye ekugadzira zvikwata kuendesa zvimwe zvirimo nekukurumidza uye pamutengo wakaderera nekugadzirisa uye nekuchimbidza kudzokorora uye kubvumidza maitiro.
Deltek ConceptShare Zvimiro uye Bhenefiti
Chengeta Yako Yekuongorora Chikwata Yakabatana - govana zvakachengeteka basa nevatengi uye vekunze vaongorori, gadzira zvirinani kuongororwa nemitsara yakanyatsotsanangurwa uye nemisi yakatarwa, uye otomatiki zivisa timu yekudzokorora yenguva dzakatarwa uye shanduro mune chaiyo-nguva.
Wana Yakajeka, Inogoneka Mhinduro - Ongorora magwaro, mifananidzo, mavhidhiyo, mapeji ewebhu, uye zvimwe, markup uye nekutaura zvakananga pane chinhu kubva kunzvimbo yekuongorora, uye shandira pamwe nekujekesa mhinduro kuti udzivise basa risingakoshi.
Tsanangudza iyo Yekutenderera Yekutenderera - Chengetedza yakasimba sosi manejimendi kuona kuti munhu wese arikuongorora zvakanyanya-zve-zvezvino zvinhu, simbisa shanduko dzakaitwa pasi pasi pikisi nekuenzanisa-ne-padivi kuenzanisa, uye kuisa pamberi, mureza, uye kusefa mhinduro kuitira kuti vagadziri vazive chaizvo izvo zvadzokororwa kugadzira.
Track uye Audit Maitiro Ekuita - Ongororo yekuongorora pamwe neyakaiswa-chiratidzo chiratidzo chedzokororo kukumbira uye kubvumidzwa, mhanyisa pfupiso repoti kutora mhinduro dzese mugwaro rinogoverwa, uye sanganisira zvigunwe zveaseti kupa humbowo hwekuona kweshanduko dzakumbirwa.
Kupa paInternet uye Kuongorora Kwekusika Kwemapoka EI-Imba
34% yemasangano epamba anoti zvikwata zvavo zvekugadzira zvinoshandisa maawa manomwe kana anopfuura pavhiki pamabasa akaita sekubatanidza mhinduro nekuwana mvumo.
2018 In-Imba Yakasarudzika Management Report. InMotionNow & InSource.
Neye Deltek ConceptShare yemubatanidzwa maficha maficha, iwe unogona kuona kuti timu yako inowana yakajeka, inoitisa mhinduro nekukurumidza uye nyore kudzora mabhodhoro uye kuendesa zvemukati nenguva.
Makomendi ekutaura uye mhinduro dzinoita kuti zvikwata zvibatirane pamusoro pebasa riri kuenderera
Mireza uye mhedzisiro pfupiso dzinoparadzanisa mhinduro dzinogoneka kubva kune zvakajairwa kuitira kuti Vagadziri vazive chaizvo izvo zvekudzokorodza kuita
Notifications uye zviyeuchidzo zvinoita kuti timu yekuongorora inyatsoziva izvo zvinoda kuongororwa kwavo uye kubvumidzwa, riini, uye riini shanduro nyowani.
Sanganisa iko online proofing kufambiswa kwebasa kuyambuka yako yese sangano ine bhizinesi-giredhi chengetedzo maficha
Kupa Paindaneti uye Kuongorora Kwekugadzira KwemaAgency
Kana yako agency ichiburitsa zvemukati memakampuru akati wandei pamaakaundi emakasitoma, kutenderera kusingaperi kwekutarisa kwekudzokorora uye kudzokorora kunogona kukuvadza yako yepazasi mutsara. Yakavakwa zvakanangana nemabatiro ekugadzira matimu eakafanana neyako, Deltek ConceptShare inounza nzira yekuyedza pamhepo kuti ikubatsire kumhanyisa iyo yekutenderera-kudzikisira mitengo yekugadzira uye nekukupa iwe yakawanda nguva yekudzoreredza mune zvaunoda mutengi.
Tora maonero epasirese ebasa rese riri kuitika
Sevha nguva yekumhanyisa mhinduro nekugadzirisa zviyeuchidzo zvekuchengetedza vaongorori pabasa
Simbisa uye ronga mafaera uye nhoroondo dzekudzokorora kuitira nyore kuongorora
Koka vatengi uye vaongorori vekunze kuti vape mhinduro pamidziyo - hapana kupinda kunodiwa
Easy-to-use maficha uye intuitive mashandiro anosanganisira nyore mune yako agency yezvirimo proofing workflowflow mukati memaminitsi
Deltek ikozvino iri kupa vashandisi mukana wekutumira ConceptShare mahara kuburikidza Gumiguru 2020:
Tags: pfungwadeltekDeltek conceptsharekubvumidzwa kwekugadzira pamhepoonline yekugadzira ongororo